Indlela ukuxhuma ithebhulethi yakho ye-Android ku-3G-imodemu. Uxhumano 3G-imodemu Android
Mhlawumbe njalo ungumnikazi wethebulethi ujwayelene nalesi simo, uma i esiphuthumayo isidingo Inthanethi, futhi eduze akunasiginali-Wi-Fi. Kulokhu, kuyasiza kuphela imodemu kanye 3G-module. Kodwa uma yokugcina ungenawo, ungakhathazeki, ngoba iningi amaphilisi lanamuhla bangasebenza eye- futhi ngokusebenzisa ikhebula ezivamile-OTG. Indlela ukuxhuma ithebhulethi yakho ye-Android ku-3G-imodemu? Funda ngayo kamuva kuyi lesi sihloko.
Ukuze uqale ingxoxo ngamazwi ambalwa ngalokho kudivayisi enikeziwe. 3G-imodemu - eyamukelayo-okuxhunyanwa isici esetshenziswa ukushintshanisa idatha nge isixhumanisi umsakazo. Ngamunye 3G-imodemu ixhunywe opharetha yakho yeselula.
Ngamagama izici, lezi zinto bayakwazi ukudlulisela ulwazi ngesivinini esingafinyelela ku-megabits eziningana ngomzuzwana. Ngaphezu kwalokho, ngokungafani ikhebula inethiwekhi Inthanethi modems "catch" cishe yonke indawo lapho kukhona uxhumano mobile. Ngakho-ke, lezi amadivayisi esisemqoka labo abahamba njalo namaqabunga ngezebhizinisi. Ezinye amaphilisi babe isixhumi zabo - Module sokufunda-SIM khadi. Kulokhu, plate uqobo usebenza njengemodemu ngaphandle ukumisa eyengeziwe (ngaphandle base). Sam zokuxhumana banga kungase kube onhlobonhlobo - WCDMA, UMTS, HSDPA, futhi HSPA +. Kodwa uma module sishoda, kubalulekile ukuba ukusebenza kanzima ukuze uxhume ku-OTG ikhebula imodemu ziye kugajethi. Ngomqondo onabile, inkulumo yesivinini sokuxhuma kanye nekhwalithi ukuthumela idatha ezimweni zombili ezifanayo. Umahluko owokuthi ukuthi akukho module for-SIM khadi kufanele ixhunywe ngqo imodemu nge ikhebula iDemo kudivayisi, futhi linikeza ezinye izimo ngoba njalo internet ukusetshenziswa.
Ake sizwe ukuthi yini izakhi kuyinto imodemu yesimanje. I element kuhlanganisa izingxenye ezimbili eziyinhloko: memory flash ugcina idatha yokuxhuma futhi 3G-module uqobo. Futhi uma laptops PC bazokubona ngokuzenzakalela izingxenye ezimbili, amapuleti zivame ubonwa njengenhlangano abavamile imodemu induku. Ukuze yegajethi yakho sikubone kahle, udinga ukwenza manipulations ezimbalwa ezilula. On kubo kuzoxoxwa ngakho izindima ezilandelayo. By the way, cishe zonke amaphilisi tablet uhlobo Zonke Android 3G-imodemu USB uhlobo ixhunyiwe nge OTG-ikhebula. Lena jikelele ye-USB ye-USB, lapho igajethi ingaze futhi ukufunda noma yimaphi ngemoto flash, nokwenza futhi ukopishe ulwazi.
Indlela ukuxhuma 3G-imodemu Android? Shintshela "Imodemu kuphela" Imodi
Kunezindlela ezimbili eziyisisekelo ngawo ungakwazi ukuzivumelanisa naso ukusebenza ngendlela efanele. Cabanga kuqala kubo. Ukuze wenze lokhu sidinga 3GSW Uhlelo nekhompyutha. Thina ukulanda Umbuso ku-PC. Ngokulandelayo, ufaka imodemu ku isixhumi uvule uhlelo. Esikhathini evelayo, chofoza inkinobho "Imodemu kuphela" bese uchofoza okukhiphayo. Njengoba ubona, indlela ulula. Nokho, it has ethile eyodwa enkulu - okusebenza hhayi kuwo wonke modems. Kule ndaba, cabangela indlela yokukhokha ehlukile kule "Imodemu kuphela".
Ngokuba lokho sikusho futhi kudingeka ikhompyutha ne-Inthanethi ukufinyelela. Download the version kwecala HyperTerminal Umbuso indawo. Okulandelayo, xhuma imodemu kukhompyutha, uqalise Manager Kudivayisi -Windows. Uhlu imishini ihlanganisa 3G-elementi zethu bese uya impahla yayo. Indlela ukuxhuma ithebhulethi yakho ye-Android ku- 3G-imodemu ku? Khona-ke khetha inkinobho "Imodemu" nekubhala isivinini, kanye nenani nezimbobo zawo. Ngemva kokuqala HyperTerminal futhi abonisa uxhumano egameni kwakwakhe (kungaba ngokungenasizathu). Kwabe sekuthi ngo-window entsha, faka ubhale inombolo port, yesivinini sokuxhuma bese uchofoza "OK". Esikhathini ithebhu evuliwe, bhala umyalo «ate1», bese «e- ^ u2diag = 0". Silindele impendulo kuyoba "KULUNGILE", ukuvimbela imodemu.
Ukuze ukuqhubekisela phambili imodemu yethu wasebenza koorektno, sidinga ukuvula amalungelo Umsuka. Kuyini lokhu? Umsuka - lokhu kube ukungena ukufinyelela i-akhawunti yomsebenzisi. Kulokhu kuba "admin". Ngamafuphi nje, la malungelo usinikeze lonke nomphathi kungenzeka (njengaku OS "windose"):
amafayela Ukuhlela uhlelo.
Ilungelo ukushintsha Idizayini yokubuka yesistimu yokusebenza "Android", esikhundleni amalebula.
Ukulondoloza kanye izilungiselelo uhlelo, izicelo, kanye izipele yabo.
Ilungelo ukususa ubudala futhi ukufaka izinhlelo zokusebenza ezintsha.
Uxhumano 3G-imodemu Android - indlela ukuthola umqondisi?
Indlela yokuqala ethandwa kakhulu - essence yayo itholakala ukusetshenziswa izinhlelo ezithile. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi zonke zibe uhlu abo kanye inani elilinganiselwe kumadivayisi asekelwe. Ezidume kakhulu yilezi:
Vula Umsuka Pro.
Super One Click (ekahle uhlelo lokusebenza Android 4.0).
3G-imodemu kungenziwa zixhunywe enye indlela. Siqukethe usebenzisa izinhlelo Android. Inzuzo enkulu le ndlela - ke asikho isidingo ukusebenzisa ikhomphyutha siqu njengoba indlela yokuqala. Yonke inqubo rutirovaniya ekhiqizwa usebenzisa kuphela kakhulu ithebhulethi, ngaphandle amadivaysi ezengeziwe. Izinhlelo ezidume kakhulu rutirovaniya Android:
Kuyaphawuleka ukuthi izinhlelo iningi lolu hlobo ngoba umlawuli ukusetshenziswa ngishiyeka - zobuqhawe. Ngenxa yalokhu, anti-virus software ukufakwa kuthebhulethi yakho, abangase basibheke la mathuluzi ukusebenza njengoba usongo futhi uvimbele kungani leso senzo sabo. Nokho, lokhu akunjalo - zonke izinhlelo ziphephile ngokuphelele futhi ayinangozi (Yiqiniso, uma uma ukuzilanda amasayithi wakho ajwayelekile).
Indlela esilandelayo sasizoba ukufaka firmware isivele isebenze nge amalungelo nomqondisi. Ngokuvamile, ngaphezu Root-amalungelo, banayo eziningi ezinye izinguqulo ezithuthukisiwe. Ithuluzi ethandwa kakhulu wabo - CyanogenMod.
Lolu hlelo ikuvumela ukuba ningabi nje kuphela ukwandisa amalungelo umsebenzisi, kodwa futhi kunikeza ithuba lokuba ngishintshe zonke izilungiselelo zesistimu. Ziyakwazi:
Umudwa ochaza ngesimo.
Izinkinobho on the yangaphandle control panel.
Panel kanye breadcrumbs.
Ukwakhiwa izinqamuleli zangaphandle.
izilungiselelo ngomsindo, izinto zomculo.
amaphrofayli Ukucushwa namabhayisikobho.
Izilungiselelo zolimi nokokufaka.
imenyu engeziwe kuzihlaka kudivayisi.
Clock amawijethi, umcimbi ekhombisa eziningi nezinye izici ewusizo.
Shintsha izilungiselelo tablet imodemu yakho
Ngakho amalungelo umlawuli sesivele sinalo. Indlela ukuxhuma ithebhulethi yakho ye-Android ku-3G-imodemu ku? Ukuze wenze lokhu, kudingeka ukulanda ku "Play Store" PPP Widget isicelo bese uyifake kwi igajethi yakho. Ukwenza kube lula ukusebenza, dala ukunqamulela ideskithophu ukuze uhlelo encane efakwe.
Okulandelayo ku-kanjiniyela indawo Izinsiza thola umshayeli ngqo ukwakheka yakho futhi imodeli ye-tablet. Umshayeli kufanele ibekwe endaweni ifolda «sdcard / pppwidget / lib». Khona-ke, ukuxhuma imodemu usebenzisa OTG-ikhebuli iya kumenyu izilungiselelo «PPP Widget» Widget. Thola "Izilungiselelo Connection" sigaba bese ubhala wonke amasethingi eziye ezihlinzekwe enye isevisi ye (ukufinyelela iphuzu futhi t.). Londoloza izilungiselelo zama ukuxhuma kwi-Inthanethi. Ngemva kabusha yokuxhuma imodemu kwithebhulethi Inthanethi kufanele ivele khona. Futhi ku ngemuva main kuyoba isithonjana elincane phezulu "3G", njengoba kuboniswe esithombeni esingezansi:
Kuthiwani uma i-Inthanethi akazanga?
Kulokhu-ke kuyadingeka ukuba sithole ukuthi modem kuba ohlwini asekelwe tablet yakho. Uma-ke ayihambisani, uzodinga esikhundleni imodemu ngakolunye, okuyinto ohlwini.
Ngakho, thina esiphethweni kanjani ukuxhuma ithebhulethi yakho ye-Android ku-3G-imodemu ngezandla zakho. Njengoba ubona, ukulungisa nokuxhuma imodemu ziye kugajethi kungaba imizuzu embalwa. Kodwa okubaluleke kakhulu, ukuze uxhume nge-Android USB 3G-imodemu, awudingi unolwazi olukhethekile emkhakheni computer kanye namathuluzi ezikhethekile.
I-Tablet Oyster t72X 3G: ukubuyekezwa kanye izici
The best onobuhle A4Tech (ama-headphone)
Ihluzo namafutha NVIDIA GeForce GT 640: Ukucaciswa, ukubuyekezwa kanye namathuba
Amalebula Self-ingcina ekhasini elingu-A4 ishidi kanye imiqulu. Ukuphrinta amalebula iphepha self-Yesigcilikisha
Thermal Amafutha CPU: okuyinto engcono futhi kungani kudingeka?
1050 Deskjet HP - thuluzi ekahle wokuhlela ukuphrinta subsystem ehhovisi elincane noma ikhaya
Finalist we "Battle of izangoma-3 'Alex Fat: Biography, amakhono kanye imbangela yokufa
Probifor - yokusetshenziswa
Isitoreji Ofanele ubisi lwebele.
Izinzuzo imindeni emikhulu: ikakhulukazi inkokhelo, inani kanye imibhalo
Amanzi isicupho: carbon dioxide - okukhiphayo, umoya wavuma
Ukugcina izicathulo ephasishi: Imibono
Izimpawu Roland futhi uCharlemagne
"Alco-isithiyo": ukubuyekezwa ezimbi futhi ezakhayo. Real Izibuyekezo narcologists ka "Alco-isithiyo"
Umdlavuza we-Lung, izimpawu, izimpawu kanye nokwelapha
Ifilimu "Territory": ukubuyekezwa. IsiRashiya isici sefilimu esiqondiswa ngu-Alexander Miller